Rudzi: Sayenzi, Teknolojia, Mitauro
Ndeupi wakakura kudarika mwedzi kana nyika? Mwedzi satellite yenyika, mwedzi mudiki. ... Kuvhiringidzika nemubvunzo nezve saizi! Kutsvaga kutsamwa kana nzvimbo yepamusoro? Nharaunda iri pasi ndeye 6 kusvika ku10 degrees. Zuva ndiro rakakura ...
Mota yemagetsi yaNikola Tesla inogona kuitwazve? Mhinduro kumota yemagetsi yaNikola Tesla Mumagetsi emagetsi emagetsi aTesla, chii chakakanganisika nechinogamuchira (bhokisi dema nematanda maviri kumashure kwemusana wemutyairi) zviri pachena mutakuri. ...
Chii chinonzi liquidus? Iri iboka redombo muAbakan Liquidus - pamatanho echikamu mutsara wekunyungudika kwakazara kwezvikamu zvakasimba. Kufanana, asi kwakapesana, pfungwa iri solidus. Liquidus tembiricha (maererano naH. Yoder, 1976) TL - ...
MDF inomira sei? Sekuru vangu Fedya yakajeka pepper MDF chidimbu inomiririra Medium Density Fiberboard. MDF yakabuda sekuvandudzwa kwenzira yakaoma yekugadzirwa kwe fiberboard mapaneru. Chinhu chacho ndechekuti…
Chii chinonzi kuprinta? Kudhinda (eng. Kudhinda - kusiya trace, kutora, kugadzirisa), kuumbwa kwematanho akatsiga zvakanyanya mu psyche mushure mechiitiko chimwe chete. Icho chimiro chekukurumidza uye kusimbirira kudzidza kwevanhu mu ...
Pane chero munhu anoziva kuti gasi rekubvisa rakagadzirwa nei?
Pane chero munhu anoziva kuti gasi rekubvisa rakagadzirwa nei? mvura, sosi, carbon dioxide, carbon monoxide. Kupisa zvigadzirwa zvemafuta uye antifreeze. kunyanya mvura uye carbon dioxide. sekusachena - carbon monoxide ...
Bhakitiriya yakawanikwa nani uye riini? Kwenguva yekutanga, mabhakitiriya akaonekwa kuburikidza nemaziso microscope uye akatsanangurwa neDutchististist Anthony van Leeuwenhoek muna 1676. Kunge zvisikwa zvese zvidiki, akavatumidza mazita ...
Kugadzira serial kwakasiyana sei nekugadzira kwakawanda? Mukugadzira kwakawanda, kugadzirwa kwezvigadzirwa kunoitwa nekuenderera mberi nekuita zvakafanana zvinodzokororwa mashandiro kunzvimbo dzebasa .. Rakadzikira zita remazita, hombe vhoriyamu yekuenderera uye ...
Rwizi rweIk runoyerera kupi? Ik, Bolshoi Ik, rwizi muBashkir ASSR uye neTatar ASSR, rworuboshwe mutero weKama. Kureba 571 km, bheseni nzvimbo 18000 km2. Inoyerera kunyanya mukati meBugulma-Belebeyevskaya ...
Kupi uye ndiani akatanga kuuya neiyo Chiedza Bulb.Sezvake pancake LENIN! "Bulb yechiedza chaIlyich" MuSt. Petersburg Yablochkov Zvakanaka, iwe watove kuudzwa nezve girobhu racho ... Zvakanaka, iyo Girobhu Emwenje (Mwenje, Evlampy) yakatogadzirwa nemiriyoni ...
Chii chinonzi tsika yemweya? + Kushivirira + Kushivirira + Kufambira mberi + Rufaro + Kugadzira + Tsitsi + Kunzwisisa + Kufungisisa + Kuziva ndeye nyika yako yemukati pamwe chete nharaunda Izvi ndizvo zvausina uye zvausingazombove. : ...
Nzira yekuwana sei chlorine oxides? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Ndeapi maitiro?
Nzira yekuwana sei chlorine oxides? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Ndeapi maitiro? Ini ndichakuudza chakavanzika, kuwana nitrogen oxides KUNYANYA kunakidza. paunoneta neklorini, edza 3% nitric acid pakushambidzika kwemukati ...
panguva ipi tembiricha mvura inotonhora Pazasi pe zero. Mhoro! Izvo zvinowanzo gamuchirwa kuti pane yakajairika mhepo yekumanikidza uye kuvapo kwema micro-kuturika mumvura - crystallization nuclei, mvura inotanga kukanda pamhepo ine tembiricha isina kunaka ...
Nheyo yemutero wakaumbwa. Kana chibharo chakaumbwa chikavhurwa, simba rekuputika rinonanga pakati peiyo faneli uye inomhanyira kumberi. Izvo zvinonzi Monro phenomenon zvinocherechedzwa - mhedzisiro, mashandiro ayo achiri kusvika ...
Chii chinonzi isomorphism? homomorphism? Homomorphism (kubva homo ... uye chiGreek morphe mhando, chimiro), iyo pfungwa yemasvomhu uye pfungwa, iyo yakatanga kutanga mualgebra, asi yakazove yakakosha kwazvo pakunzwisisa chimiro uye chiyero chezvinobvira ...
Ndedzipi dzidziso dzekupedzisira nezvekwakabva vanhu? kuti hongu, iyo ndiyo pfungwa - hazvisi nyore mavambo emunhu, sezvavaimbofunga kare, semuenzaniso, ivo vaifunga kuti chazvino ...
Mupanduki ndiani uyu ?? Vapanduki (vapanduki) - mauto akazvimiririra evagari vemo, vachipokana nezviremera. Ivo dzimwe nguva vanonziwo sevashori vanopokana, kunyangwe paine mashoma fanano pakati pevanozvidzivirira nevapikisi. Kazhinji vapanduki ...
Zvinorevei kuti munhu "anoshamisa"?
Zvinorevei kuti munhu "anoshamisa"? zvisina kujairika, kupenya kubva muboka revanhu ... nekuda kweduramazwi rinotsanangura rinopa tsananguro inotevera yezvinowedzera. ZVINOKOSHA: Zvakatanhamara, zvakasiyana nevamwe. unzenza kurumbidzwa nenzira), zvinoreva isiri-standard ...
Ko iro zita rekuti "blued simbi" rakabvepi?
Ko iro zita rekuti "blued simbi" rakabvepi? Vorone # 769; kugadzirwa kwesimbi (oxidation, nhema, bluing) maitiro ekuwana pamusoro pekabhoni kana yakaderera-alloy simbi kana simbi yekukanda simbi yema iron oxides (Fe3O4, nezvimwewo) neukobvu hwe 1-10 ...
Ndidzidzise kuturikira semuenzaniso nKl muKl pendant -physics. Ini ndoziva kugadzirisa matambudziko, asi ini handizive kushandura tsika. Ini ndinogara ndichishandisa kugona kuwanda neumwe ndisina kuchinja mhedzisiro. Semuenzaniso 36 ...
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 2,571 masekondi.